Firenena efatra azo havaozina 100% mandritra ny taona 2017, inona ireo? | Fanavaozana maintso
Ho an'ireo firenena ireo, ny fampiasana angovo azo havaozina be dia be dia tsy tanjona hotratrarina, fa ny zava-bita hitazomana. Manararaotra tsara ny anao harena voajanahary Ny firenena sasany dia nanatanteraka ny nofinofy hanana loharanon-karena angovo azo havaozina 2017% amin'ny 100.
Fanjakana efatra no mandeha tsara ao resaka angovo azo havaozina, manome lesona angovo ho an'ireo toekarena lehibe, izany hoe mamokatra ny filany rehetra amin'ny angovo "maintso".
1.1 Angovo azo havaozina
I Uruguay no voalohany amin'ireo firenena ireo, ny 14 septambra lasa teo, dia nahatratra 24 ora ny taranaka amerikana avy amin'ny rivotra, ny herinaratra, ny biomassa ary ny herin'ny masoandro.
Nasongadin'ny governemanta amin'ity firenena ity fa Uruguay dia tao anatin'ny 6 taona lasa vola maherin'ny 22 miliara dolara amin'ny angovo azo havaozina maharitra, mba handresena amin'io fomba io ny fiankinan-doha amin'ny solika sy gazy.
Ramón Méndez, Tale nasionalin'ny angovo ary mpanentana ny drafitra 25 taona, izay hatramin'ny 2008 dia mikasa ny hanavao ny Famokarana angovo Uruguay, hoy izy "Hanana fotoana marobe isika ka hatramin'ny 100% ny herinaratra laninay any Uruguay dia avy amin'ny rivotra".
Ity firenena kely misy mponina 3,3 tapitrisa ity dia efa nanararaotra ny fahafahan'ny renirano hiteraka famokarana herinaratra ary nanangona vola isan-taona ny 3% -n'ny vokatra an-trano ambanin'ny tany (GDP) amin'ny fanavaozana ara-drafitra mba hahatratrarana ny fiandrianam-pirenena amin'ny herin-taona. mampihena ny dian-tongony.
Raha ny filazan'i Méndez, "Amin'ny angovo rehetra lanin'i Uruguay dia manodidina ny 50% no miankina amin'ny angovo azo havaozina, ary ao anatin'ny sehatry ny herinaratra amin'ny 2015 dia 90% mahery no ho avy amin'ny angovo azo havaozina."
Raha mijery ny tatitra iray avy amin'ny World Wide Fund for Nature (WWF amin'ny teny Anglisy) isika, Costa Rica, Uruguay, Brazil, Chile ary Mexico no mitarika ny ezaka any amin'ny faritra manova ny paradigma ary misafidy angovo azo havaozina fa tsy solika fôsily toy ny menaka sy arina.
Raha nanomboka niresaka momba ny angovo madio i Costa Rica 30 taona lasa izay, dia toa sangisangy izany, saingy tsy niandry ela fa ny hafa kosa naka tahaka ny diany. Mandraka androany, ny firenena fantatra amin'ny anarana hoe Soisa amerikanina afovoany, nanomboka nijinja fahombiazana lehibe mihoatra ny fampanantenana sy fikasana tsara.
Costa Rica dia mandroso hatrany mba ho lasa firenena amerikana latina havaozina 100% voalohany, manararaotra ny loharanon-karena herinaratra, hafanana, masoandro ary biomassa.
ny World Wildlife Fund (WWF) dia manondro fa manakaiky firenena vaovao ny firenena niavaka amin'ny tantarany angovo: nanjary firenena voalohany tany Amerika Latina notohanan'ny angovo azo havaozina 100%.
Raha dinihina ny tatitra dia asehon'ny WWF fa i Costa Rica dia mety hanana gigawatt 223.000 isan-taona amin'ny famokarana herinaratra, izay ao latsaky ny 10% no hararaotina, ary manana fahaizan'ny geothermal sy ny famokarana rivotra be. "Izy no paradisa angovo azo havaozina lehibe indrindra any amin'ny faritr'i Amerika Afovoany."
Ankoatr'izay, ny governemanta dia nametraka ny tanjony hahatratra toekarena tsy miandany amin'ny karbaona ary noho izany dia nisafidy ny hahatratra ny 2021 tamin'ny fanjifana angovo izy mifototra tanteraka amin'ny loharanom-baovao azo havaozina.
Tamin'ny 1998 dia notokanana ny orinasa mpamokatra herinaratra voalohany eto amin'ny firenena. Izany dia mamokatra 90% ny angovo ilainy, ny SME an'ny firenena dia mifototra amin'ny fanovana ny vokatra fambolena sy ny fanamboarana akanjo. Ity farany dia nahazo tombony tamin'ny fahazoana ny firenena nahazo ny tombotsoan'ny Africa Growth and Opportunity Act avy amin'ny governemanta amerikana. Nahavita namboarina 100% i Lesotho, noho ny herin'ny herinaratra, saingy mbola mitolona ihany io miaraka amin'ny haintany amin'ireny fotoana ireny dia mividy angovo avy amin'ny firenena mifanila aminy hafa izany. Ny dingana azo havaozina dia tsy maintsy atambatra ary eo am-pamahana ny famahana azy.
Ny angovo ao amin'ity nosy kely any avaratr'i Eropa ity dia miankina amin'ny angovo azo havaozina tanteraka. Tamin'ny taona 2011 dia namokatra 65 444 GWh ny firenena angovo voalohany, izay maherin'ny 85% dia avy amin'ny loharanon'angovo azo havaozina ao an-toerana.
Ny angovo geothermal an'ny volkano dia nitondra ny roa ampahatelon'ny angovo voalohany, nifamenoana tamin'ny herinaratra 19,1% sy ireo loharano hafa. Tamin'ny 2013, ny herinaratra vokarina dia nahatratra 18116 GWh, vokarina saika Angovo azo havaozina 100% "nihoatra ny 99% tamin'ny 1982 ary saika natokana hatrizay."
Ny fampiasana lehibe an'ny angovo geothermal izy ireo no manafana trano, miaraka amin'ny 45,4% amin'ny totalin'ny fanjifana geothermal, ary ny famokarana herinaratra, miaraka amin'ny 38,8%.
Manodidina ny 85% amin'ireo trano ao amin'ny firenena no manafana izy ireo amin'ity angovo azo havaozina ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Firenena havaozina 100% efatra
Ny fanavaozana dia mangataka ny hanasazy ireo izay mandoto